Maha vaky fo… | NewsMada
Maha vaky fo…
Hatramin’ny omaly, mbola mitana ny sain’ny maro ny momba ilay vonoan’olona feno habibiana, nahafatesana mpivady kely iray sy ny zanany vao dimy taona monja, maty notsatotatohin’ny jiolahy nanafika azy ireo tamin’ny antsy, tao Mamoladahy, Imerintsiatosika, ny alatsinainy teo. Tao amin’ny pejy facebook iray, ohatra, omaly fotsiny, nahatratra 500 mahery ny nanao « commentaires » na fanehoan-kevitra, raha 300 mahery no nizara (partage) ilay vaovao. Hatramin’ny gazety mpiseho isan’andro, atsy La Réunion sy ny Nosy Maorisy aza, nitatitra ity vaovao mahatsiravina ity koa.
Tao anatin’ireo fanehoan-kevitra, marobe no naneho alahelo lalina, gina tsy nahaloa-peo, tsy vitsy ireo ontsa, nilaza ho latsa-dranomaso, niraraka mila tsy hisy farany ny « Rip » , adika hoe « mandria am-piandanana », ny firariana fihononana sy fiombonana alahelo amin’ny fianakavian’ny maty… Fa marobe koa anefa ireo nentin’ny fony ka nahalaza zavatra mihoatra ny tokony ho izy. « Rehefa voasambotra ireo namono, avoahy ho hitam-poko hitam-pirenena ho karakaraina ». Atao fitsaram-bahoaka no tiany holazaina amin’izany. “Tsy vanona, tsy matahotra an’Andriamanitra !”, sns.
Mamerina sady manamafy indray ny adihevitra momba ny tsy fisian’ny fandriampahalemana eto amin’ny tany sy ny firenena iny tranga mampalahelo niseho tao Imerintsiatosika iny. Tsy milamina ny tany, mandry an-driranantsy, mitaintain-dava, toa ny soabakaka am-body riana ny vahoaka… Tsy mahantra , tsy manan-karena fa samy mizaka sy miaina ny firongatry ny asan-jiolahy, ny fakana an-keriny tsy misy farany. Eo koa ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika, izay tsy an’iza fa an’ny mpitandro filaminana ihany, nefa hita ampiasain’ny jiolahy na fikambanan-jiolahy hanaovana ny asa ratsiny. Toa manamafy fa misy firaisana tsikombakomba lalina ao. Moa tena “tandroka aron’ny vozona”, “mpiaro ny vahoaka sy ny fananany”, tokoa ve ?
Inona no ataon’ny mpitondra fanjakana ? Tsy mitombina manao fisehosehoana etsy sy eroa, mitety faritra tsy ankijanona, manao fampielezan-kevitra alohan’ny fotoana, mampiasa ny fitaovam-panjakana (helikoptera, fiaram-panjakana…).Volam-bahoaka avokoa izany rehetra izany. Maha vaky fo ny maro…